बुद्धको शिक्षा र लोकतन्त्रमा सामन्तयुगीन हुकुमी शैली र तामझामको निरन्तरता - हाम्रो देश
हामीले आफ्ना क्रियाकलापबाट देश विदेशमा हाम्रा कीर्तिमानहरुको प्रतिष्ठा बढायौं कि यथाशक्य दोहन केवल दोहन मात्र गर्‍यौं यो आजका सत्तासीनहरुले अद्यावधिक खाता हेरेर इमानदारीका साथ हिसाव निकाल्नै पर्ने कुरा हो । निक्र्यौल गर्नै पर्ने कुरा हो । ‘हामीले डलर असुलेर देशी विदेशी धेरैलाई पवित्र सगरमाथाका काँध र टाउकामाथि चढायौं । मानिससँगै तिनका नाना थरीका फोहर पनि सगरमाथा चढायौं । हामी डलरप्रति त हुनसम्मै हुरुक्क भयौं सगरमाथाको स्वास्थ्यप्रति यसको वातावरणीय सुन्दरता र पवित्रताप्रति भने किन्चित् पनि सम्वेदनशील हुन सकेनौं । यतिसम्म अन्याय अत्याचार गर्ने अधिकार हामीलाई सगरमाथाले कहिले दिएछ ? प्रकृति तथा पर्यावरण विधानले कहिले दिएछ हामीलाई यो अधिकार ? यो घोर अन्याय अत्याचारको, यो सम्वेदनहीनताको हर्जाना पनि कुनै दिन हामीले तिर्नुपर्ला कि ? नतिरी यसै चल्ला ?’ यो हाम्रा सत्तासीनहरुले चिन्तन मनन गर्नैपर्ने कुरा हो । यसमा आजका कम्युनिष्ट शासकहरु के भन्छन्, प्रधानमन्त्री ओली के भन्छन् ? हामी जनतालाई सुन्नुपर्‍या छ ।हिलारीलाई लिएर तेन्जिंग शेर्पा चढिदिँदैमा सगरमाथा सगरमाथा बनेको त हैन । एभरेस्टले नापिदिएरै मात्र सगरमाथा सगरमाथा बनेको पनि त हैन । सगरमाथाको उँचाइ कसैले कुल्चिदिनकै लागि पनि त हैन । उँचाइको बोधपरक लाक्षणिक महत्व त छँदै छ । हामी नेपालीका लागि सगरमाथाको धार्मिक सांस्कृतिक पौराणिक महत्व पनि छ ।
हामीकहाँ सत्तासीनहरुले नयाँ नेपालको नयाँ लोकतान्त्रिक पद्धति भन्दै आज पनि सामन्तयुगीन हुकुमी शैली, र तामझामलाई नै निरन्तरता दिएको देख्न परिरहेको छ ।नेपालमा आज पनि बुद्धपूर्वका व्राह्मणबादको भूत कायम छ । नेपालमा आज पनि सत्तासीनहरु आफै आफ्नो मर्यादाक्रम निर्धारण गर्छन् र सलाम खान्छन् । सार्वभौम भनिएका जनताको कुनै मर्यादा छैन ।
यी बुद्धशिक्षाका सांङ्केतिक झलक मात्र हुन् । मूलतः बुद्धले हरेक क्षण सचेत रहेर आफ्ना काम र मनसायको मूल्याङ्कन गर्दै अगाडि बढ्न सल्लाह दिनुभएको छ । विपश्यना भनेकै आफ्नो अन्तरमा प्रवेश गरेर आपूmले आफैलाई हेर्नु बुझ्नु हो । आपूmप्रति निरन्तर आलोचनात्मक सतर्कता भाव राख्न सिकाउने बुद्ध शिक्षा सर्वथा जीवनोपयोगी छ । यसको यो पक्ष कम्युनिष्टहरुको आत्मआलोचनापद्धतिसँग पनि धेरथोर मिल्छ ।नेपालमा जुनसुकै नामका सत्तासीनहरुबाट पनि बुद्धको दोहन मात्र भएको छ, बुद्धशिक्षाको किन्चित् पनि सम्मान भएको छैन । बुद्धप्रति आस्था राख्ने समाज र व्यक्तिहरु हम्रा सत्तासीनहरुको दोहकप्रवृत्ति देखेर दुःखित रहेका हुन सक्छन् । बौद्ध पर्यटकहरु नै पनि पर्यटनक्रममा दुःखी बन्ने गरेका हुनसक्छन् ।